အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဗာရာဏသီမြို့တွင် လူကူးခုံးကျော် တံတား ပြိုကျ၊ ၁၉ ဦးသေဆုံး - Yangon Media Group
အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဗာရာဏသီမြို့တွင် လူကူးခုံးကျော် တံတား ပြိုကျ၊ ၁၉ ဦးသေဆုံး
လပ်ကနောင်း၊ မေ ၁၆
အိန္ဒိယနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း ဥတ္တရာပရာဒေ့ရ်ှပြည်နယ် ဗာရာဏသီ မြို့တွင် မေ ၁၅ ရက်က လူကူးခုံး ကျော်တံတားတစ်စင်း ရုတ်တရက် ပြိုကျခဲ့၍ အနည်းဆုံး လူ ၁၉ ဦး သေဆုံးခဲ့ရသည်။ တံတားအောက်တွင် ကားများနှင့် လမ်းသွားလမ်းလာအချို့ အပြိုအပျက်များကြား ပိတ်မိနေဆဲဖြစ်သည်ဟုလည်း သိရှိရသည်။ ပိတ်မိနေသော ကားများ နှင့် လူများ၏ အရေအတွက်ကို မသိရှိရသေးသော်လည်း ကယ်ဆယ်ရေးသမားများသည် စစ်သားများ၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ ပူးတွဲကာ ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နေကြသည်။
”ကယ်ဆယ်သူများဟာ အဖွဲ့ ခုနစ်ဖွဲ့ခွဲပြီး ရှာဖွေနေကြပါတယ်။ ၁၉လောင်းတော့ ရှာဖွေတွေ့ရှိထား ပါတယ်”ဟု ကယ်ဆယ်ရေးအရာရှိတစ်ဦးက အေအက်ဖ်ပီသတင်း ထောက်သို့ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်သည်။ တံတား၏ ပြိုကျသောအပိုင်းသည် ဆောက်လုပ်ဆဲအပိုင်းဖြစ်သည်ဟု မျက်မြင်သက်သေတစ်ဦးက ပြောဆိုလိုက်သည်။ ”တံတားက အနည်းဆုံး ကား လေးစီးမှ စက်တပ်လန်ချား တစ်စီးနဲ့ မီနီဘတ်စ်တစ်စီးတို့အပေါ် ပြိုကျသွားခဲ့ပါတယ်”ဟု ဗာရာဏ သီမြို့သားတစ်ဦးက ထုတ်ဖော် ပြောဆိုလိုက်သည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် တံတားတည် ဆောက်မှုများအပါအဝင် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများသည် စံချိန် စံညွှန်းပြည့်မီမှုတွင် အားနည်းသော ကြောင့် ပြိုကျမှုများ မကြာခဏ ကြုံတွေ့နေရသည်။ ၂ဝ၁၆ခုနှစ်ကလည်း ကိုးလ်ကတ္တားမြို့တွင် တံတား တစ်စင်းပြိုကျခဲ့၍ လူ ၂၆ ဦး သေဆုံးခဲ့ရသည်။ ဗာရာဏသီမဲဆန္ဒနယ်မှ ရွေး ကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံရသူ ဝန်ကြီးချုပ် နာရန္ဒရာမိုဒီက တံတား ပြိုကျ၍ သေဆုံးခဲ့ရသူများအတွက် မိမိစိတ်မကောင်းဖြစ်ရသည်ဟု ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်သည်။
အမေရိကန်က အီရန် ဗဟိုဘဏ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကို အရေးယူ ပိတ်ဆို့
ရိုက်တာ သတင်းထောက် နှစ်ဦးကို စာရွက်စာတမ်းများ မပေးခဲ့ကြောင်း ရဲဒုတပ်ကြပ် ထွက်ဆို
အာရှ ထိပ်တန်းမင်းသမီး ဒီပီကာပါဒူခွန်
ကောင်းမှုတော် ဘုရားကြီး ထုံးသင်္ကန်း ပြန်လည် ကပ်လှူနိုင်ရေး စစ်ကိုင်းမြို့မိမြို့ဖ အဖွဲ့ဦးေ
Google ဂယက် ရက်ပိုင်းသာရှိသေးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ဟွာဝေးရောင်းအားအခြေအနေ မပြောနိုင်သေးဟ?
FDA မှ ဒုတိယ ကြီးကြပ်ရေးမှူး အဓမ္မကျင့် အသတ်ခံရမှု တက္ကစီယာဉ်မောင်းကို ပုဒ်မကြီးလေးခုဖြင့် တရား?
စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီးတွင် ခြောက်လအတွင်း တရားမဝင်သစ်တန် လေးထောင့်ငါးရာကျော်ကို တရားခံ သံ